मलेसियामा पनि भोजपुरी चलचित्रको बजार छ - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७१ जेठ ११ गते १७:५७
नेपालमै बनेको पहिलो भोजपुरी चलचित्रका निर्माता हुन, रञ्जन पौडेल । ‘हमार वदला’ नामक भोजपुरी भाषाको चलचित्र बनाएका रुपन्देहीका स्थायी बासिन्दा पौडेल हाल भने मलेसिया आइपुगेका छन् । करिब ६० लाख भन्दा माथि लगानी लगाएर बनाएको चलचित्रका बारेमा यस हप्ता दैनिक नेपालसँग कुराकानी गर्न तयार भए । मलेसियामा रहेका नेपाली दर्शकमाझ चलचित्र पुराउने लक्ष्य लिएका उनले केही समयपछि नै मलेसियामा नेपालीको बाक्लो उपस्थिति भएको जोहर, पेनाङ्ग र राजधानी केएलमा आफ्नो चलचित्रको विशेष प्रर्दशन गर्न लागेका छन् । चलचित्र प्रर्दशनबाट उठेको रकमको केही हिस्सा कार्यरत अवस्थामा नै घाइते भएका, अंगभंग नेपालीलाई सहयोग गर्ने उनले बताएका छन् । उनीसँग हाम्रा मलेसिया प्रतिनिधी अर्जुन काफ्लेले कुराकानी गरेका छन् । उनको चलचित्र र नेपालमा अन्य भाषाभाषीको चलचित्रको समग्र अवस्था र अन्य विषयमा गरिएको साक्षात्कार :
भोजपुरी चलचित्र बनाउने सोच कहाँबाट आयो ?
पहिला त नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्ने सोच बनाएको थिएँ । तर, म रुपन्देहीको बासिन्दा जहाँ भोजपुरी भाषा भाषिका बासिन्दाको बाक्लो बसोवास भएकाले मेरो ध्यान सोही भाषाको एउटा चलचित्र बनाउने तर्फ गयो । मैले सो बारे सोधी खोजी गदैै जाँदा एउटा अर्का कुरा पनि फेला पारे त्यो के थियो भने नेपालमा नै दर्ता गरेर नेपालमा नैै भोजपुरी चलचित्र बनेका रहेछन् । अनि नेपालमा नै दर्ता भएको पहिलो भोजपुरी चलचित्र बनाउने जस पनि लिने सोच आयो मुख्य त नेपालमा पनि गुणस्तरिय भोजपुरी चलचित्र बनाउन सकिन्छ विहार र भारतीयले मात्र भोजपुरी चलचित्र बनाएर हुदैन नेपाली स्वादको भोजपुरी भाषाको चलचित्रमा लगानी गरेको हुँ । त्यसका साथै हाम्रो तराइको एउटा भिन्न कला र संस्कृति छ त्यसको संरक्षण गर्न पनि चलचित्र बनाएको हुँ ।
चलचित्रमा त निकै लगानी गर्नुभयो नि कस्तो बनेको छ चलचित्र ?
मैेले अघि नै भनीसके नेपालमा भोजपुरी भाषाको चलचित्र बनेको रहेनछ हुनसक्छ । नेपाली लगानीकर्ताले चलचित्र बनाए होलान । तर, नेपालमा नै दर्ता गरेर चलचित्र बनेका छैनन् यसकारण पनि मैले मेरो चलचित्रमा लगानी अलि बढि नै भएको छ । गुणस्तरीयतामा ध्यान दिएर पनि चलचित्रको बजेट बढेको छ । तथापी भोजपुरी भाषाको चलचित्रको बजार राम्रो भएकाले पनि चलचित्रमा ६० लाख भन्दा बढि लगानी गरेको छु ।
त्यस्तो के छ तपाईको चलचित्रमा र दर्शकले हेर्न जाने ?
मेरो चलचित्रमा पारिवारीक कथा छ जुन परिवारका सवै सदस्य बसेर हेर्न मिल्छ अहिले नेपाली र भोजपुरी चलचित्रमा यौन विषयवस्तुलाई लिएर चलचित्र बनाउने लहर चलेको छ जसले हाम्रो चलचित्रलाई कता तर्फ ढकेल्दै छ त्यस्ता चलचित्र न समाजले पचाउछ न परिवारमा बसेर हेर्ने नै मिल्छ त्यो भन्दा अलि फरक छ मेरो चलचित्रमा । सुन्दर नृत्य र मार्मिक कथा नै मेरो चलचित्रको सबल पक्ष हो । हुन त अरु पक्षलाई पनि कमजोर भनेको होइन तर पनि मेरो चलचित्र सवै जना बसेर हेर्न मिल्छ । त्यसो त मेरो चलचित्रले स्टारमेड भन्दा पनि रंगमञ्चका कलाकारलाई अवसर दिएको छु । स्टार कलाकारले मात्र चलचित्र बनाएर चल्छ भन्ने भ्रम पनि तोड्न मैले रंगमञ्चका कलाकारलाइ स्थान दिएको हुँ ।
तपाई आफै पनि चलचित्रको पात्र हुनु हुन्छ कस्तो रोल छ तपाईको ?
म पहिलाबाट नै अभिनय गर्दै आइरहेको कलाकार हुँ । यो चलचित्रमा मेरो मुख्य खलनायकको भुमिका छ जुन मेरो तर्फवाट सशक्त अभिनय छ तर अब तपाई दर्शकको नजरमा मेरो अभिनय कस्तो बनेको छ छुट्टाउनु हुनेछ । जहाँ सम्म मेरो भुमिका दर्शकले मन पराउनु हुनेछ ।
मलेसियामा चलचित्र प्रर्दशनको लागि लिएर आउनु भएको छ के अपेक्षा छ मलेसियामा रहेका नेपाली दर्शकसगँ ?
मेरो चलचित्रले भोजपुरी भाषाको माया गर्ने मात्र होइन हाम्रा नेपाली सवै दाजु भाइले चलचित्र हेर्नु हुनेछ किनकी एउटा नेपाली दाजुभाइले बनाएको चलचित्र हो अर्का कुरा यो चलचित्रको नेपाली भाषामा भवाईस डब पनि भइसकेको छ त्यसकारण पनि चलचित्रलाई मलेसियाका नेपाली दर्शकले मन पराउनु हुनेछ । अर्का कुरा मेरो चलचित्रको प्रर्दशनबाट उठेको रकमको केही रकम यहाँ काम गरिरहेका नेपाली श्रमिक जो कार्यअवस्थामै अंग भंग भएका छन् तिनलाई पनि सहयोग गर्ने भएको छु । यो बाहेक अहिले म मलेसियामा छु यहाँको प्रर्दशन पछि अन्य देशमा पनि चलचित्रलाई प्रर्दशन गर्ने लक्ष्य लिएको छु जहाँ नेपाली दाजु भाइकोहरु बसोवास गरिरहनु भएको छ । यसका साथै नेपालमा पनि चलचित्र प्रर्दशन गर्ने छु ।
चलचित्रमा त धेरै बजेट लगाउनु भएछ नि ?
बास्तवमा छिमेकी देशमा बन्ने चलचित्र भन्दा त धेरै बजेट त होइन तर पनि ६० लाखको लगानीलाई नेपालमा बनेका चलचित्रको दाजोमा धेरै बजेट नै भन्न मिल्ला । चलचित्रको सवै पक्षलाइ मेन्टिनेन्स गर्न पनि चलचित्रको बजेट त्यति पुग्यो । त्यो बाहेक राजधानी भन्दा अलि दुर दराजमा छायाँङ्कन गरिएकाले पनि यो चलचित्रको लगानी बढेको हो ।
नयाँ चलचित्र निर्माता हुनुहुन्छ कसरी चलचित्र प्रर्दशनको मेलोमेसो बनाउदै हुनुहुन्छ ।
हुनत मैले पहिलो पटक चलचित्रमा लगानी गरेको हुँ । तर, पनि मुल कुरा के हो भने चलचित्र कस्तो छ भन्ने हो मेरो चलचित्र राम्रो बनेको छ । मेरो चलचित्रमा सवै पक्ष सवल छन यो कारण पनि मेरो चलचित्र दर्शक माझ पुग्ने मात्रै होइन सफलता हात पर्ने छ । पहिला त म मलेसिया र नेपालमा प्रर्दशन गर्ने सुरमा छु । फिल्म बजारमा आउदा नयाँ नै हुन तर पनि कथा कस्तो हो त्यो कुरा चै मुल कुरा हो । फिल्म नराम्रो बनोस भनेर कसैले पनि लगानी गर्दैन । तर सवै कुरा भने जस्तो हुनु प¥यो नि ? सफल फिल्म बन्न लागेका सवै कुरा मेरो फिल्ममा छन् त्यसकारण पनि मेरो चलचित्रलाइ दर्शकले मन पराउनु हुन्छ । अहिले मलेसियाका नेपाली श्रमिकका होस्टलमा पुगेर चलचित्रको बारेमा प्रचार गर्ने छु अनि चलचित्रलाई मलेसियाका विभिन्न शहरमा प्रर्दशन गर्ने सोच छ ।
नेपालमा बनेको चलचित्रमा गुणस्तर वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ होला ?
चलचित्रको गुणस्तरको कुरा गर्दा एउटा पक्षलाइ मात्र दोष दिएर हुदैन सवै पक्ष हेर्नुपर्छ । प्राविधिक,कथा,पटकथा देखि अरु सवै पक्षलाई हेर्नु पर्छ । अनि चलचित्र एक जनाको बलवुताले मात्र बनेको होइन सवैको टिमवर्क चाहिन्छ । अर्का पक्ष लगानी वढाएर मात्र चलचित्रको गुणस्तर बढ्दैन गुणस्तर बढाउन सवैको साथ अपरिहार्य छ ।
तपाईंको चलचित्रले चै कतिको गुणस्तरमा ध्यान दिएको छ ?
पक्कै पनि मेरो चलचित्रमा ध्यान दिएको छु । पहिलो कुरा त नेपालमा बनेको भोेजपुरी चलचित्र हो जुन भारतमा बनेका भोजपुरी चलचित्र जस्तै बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । यो कारण पनि मेरो चलचित्रले प्राविधिक र अरु सवै कुरामा ध्यान दिएको छ ।
एउटा फरक प्रसंग चलचित्र निर्माताहरु नायिकासंगको सामिप्यता वढाउन पनि चलचित्रमा लगानी गर्न थालेका छन् रे नि ?
जहाँ सम्म नायिका संगको रोमान्सको कुरा छ हुन सक्छ केहि निर्माताले त्यो गलत काम गर्ने नियतले चलचित्र बनाए होलान तर म यो कुरामा विल्कुलै फरक मत राख्छु । केहि निर्माता निर्देशकको कारण पनि यो हल्ला आएको होला । तर मेरो पुरा फिल्म युनिटमा त्यस्तो भएन र अरु निर्मातालाई पनि त्यो नियत राखेर चलचित्र नबनाउनु होला भन्छु म । यो काम भयो भने चलचित्रमा विकृति भित्रिन्छ ।
नेपालमा नेपाली भाषाकै चलचित्रले दर्शक तान्न सकेका छैन यस्तो अवस्थामा अन्य भाषा भाषीको चलचित्रको अवस्था चै कस्तो छ ?
नेपालमा बनेका नेपाली चलचित्र प्राय हिन्दीभाषाबाट पूर्ण प्रभावित भएर बन्ने गरेका छन् । अझ भन्ने हो भने नेपाली दर्शकले त्यस्ता चलचित्र वाट केहि पनि पाइरहेका छैनन् त्यो भएर पनि नेपाली दर्शक हल सम्म पुग्न गाह्रो मानिरहेका छन् । अझ भाषा भाषिाका चलचित्र त हलमा पुग्न नै सकिरहेका छनैन् । यो कारण पनि नेपालमा बनेको चलचित्रलाई अव दर्शक माझ पु¥याउने मात्र होइन नेपाली दर्शकको स्वाद अनुसारको चलचित्र बनाउनुपर्छ । अन्य भाषा भन्दा भोजपुरी भाषाको चलचित्रको अवस्था भने अहिलेको अवस्थामा सन्तोषजनक नै मान्नु पर्छ ।
मैले नयाँ चलचित्र लिएर तपाईहरुको सामु आएको छु । एक पटक तपाइहरुले पनि मेरो चलचित्र हेरिदिनु होला । जुन चलचित्रको कथा तपाई हाम्रो समाजमा नै भएको कथा छ । त्यो बाहेक मेरो चलचित्रको प्रर्दशनबाट उठेको रकमले यहाँका नेपाली श्रमिकलाई केहि हद सम्म सहयोग समेत पु¥याउने छ ।